Zimkhalele oshise owesifazane nge-acid eWillow | News24
Zimkhalele oshise owesifazane nge-acid eWillow
ISITHOMBE:SITHUNYELWE Uboshiwe osolwa ngokubulala uNksz Thulile Phungula(osesithombeni). UMnuz Sphiwe Mbanjwa uzophinde avele zingu 8 kuMandulo enkantolo kamantshi.
UVELE enkantolo kamanstshi owesilisa osolwa ngokuklinya, athele aphinde aphuzise i-acid uThulile Phungula waseWillowfontain ongcwatshwe ngesonto eledlule.
UMnu Sphiwe Mbanjwa (33) ongubaba womntwana kaPhungula uzobuyela enkantolo ngoLwesibili lapho azobe esefaka khona isicelo sebheyili. UMbanjwa kumanje ubhadle ngaphakathi ejele lapho ebhekene necala lokubulala.
UPhungula ubulawa nje ngabe uqale emsebenzini omusha ngoLwesibili kanti futhi lokhu kubulawa kwakhe kwenzeke ngesikhathi lapho ebehlele indumezulu yomcimbi womntwana wakhe obezobe egubha unyaka wesithathu.
Isehlakalo sashaqisa umphakathi waseWillowfontain ngenxa yesihluku esenzeka ngaso ngesikhathi ebulawa uPhungula.
Abomndeni wakhe nabo babeshaqekile ngalesi senzo bebabaza indlela yesihluku uPhungula abulawa ngaso.
Umamcane kaPhungula, uNonsikelelo Phungula, wakubeka kwacaca ukuthi uThulile ubengasenabudlelwano noMbanjwa.
Echaza umamncane wathi bese kunesikhathi eside impela bahlukana.
“Wahlukana naye ingane yabo inezinyanga eziyisikhombisa izelwe. Ngeke size sazi ukuthi ngabe yini ngempela eholele ukuthi aze ambulale ngesihluku esinjena.
“Sonke siyazi ukuthi uThulile ubengenabudlelwano namuntu, abekwenza nje ukuthanda umntwana wakhe nomndeni wakhe,” kusho umamncane wakhe.
UPhungula kusolakala ukuthi waklinywa uMbanjwa owabe esemthela waphinda wamphuzisa i-acid. Lokhu kwenzeke kude buduze nekhaya lakhe uPhungula.
Wakwazi ukugaqa ngamadolo aze afike ekhaya lakhe lapho okuthiwa wafike washo ukuthi uMbanjwa nguye omshise nge-acid wamphuzisa wabe esemthela ngayo.
Okhulumela amaphoyisa ase Plessieslaer uKapteni Musa Ntombela uthe akucaci ukuthi ngabe yini eyabe ibangwe ilaba bobabili.
Uthe uMbanjwa zimkhalele ngezikhathi zasekuseni ngoLwesihlanu olwedlule eMbali Unit 18.
“Sasithembisile ukuthi yena uzoboshwa kanti lokho kwenzeke amaphoyisa eseqoqe zonke izitatimende. Uzovela enkantolo ngeLwesibili zingu 8 lapho ezobe esefake isicelo sebheyili.”